Real Madrid Oo Doonaysa Xiddig Ka Tirsan AC Milan Oo Afar Gool Iyo Toddoba 7 Caawin Ah Sameeyey Toban Ciyaarood Gudahood – Cadalool.com
Real Madrid Oo Doonaysa Xiddig Ka Tirsan AC Milan Oo Afar Gool Iyo Toddoba 7 Caawin Ah Sameeyey Toban Ciyaarood Gudahood
Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa doonaysa in beddelka Cristiano Ronaldo ay ka dhigato xiddiga AC Milan garabka uga ciyaara ee Suso.
24 jirkan u dhashay waddanka Spain ayaa dhaliyey afar gool iyo toddoba kale oo uu caawiyey toban ciyaarood oo horyaalka Serie A oo uu saftay, waxaana isku-darka caawinta iyo dhalinta ka sarreeya Cristiano Ronaldo oo kaliya oo saxeexay toddoba gool iyo afar kale oo uu caawiyey.
Heshiiska uu Suso kula jiro AC Milan ayaa dhamaan doona sannadka 2022, hase yeeshee waxa qandaraaskiisa lagu burburin karaa 40 milyan oo Euro, sida uu qoray wargeyska Tuttosport waxa jira wada-hadallo horumar loogu samaynayo qandaraaska uu kula jiro Milan.
Dhinaca kale, warbaahinta Talyaaniga ayaa tibaaxay in madaxweynaha Real Madrid, Florentino Perez uu doonayo inuu ka faa’iidaysto lacagta yar ee lagu burburin karayo qandaraaskiisa oo uu bisha January u dhaqaaqo soo xero-gelintiisa.
“Waa sharaf in laygu xidhiidhiyo Madrid, Barca ama City, laakiin Milan waa koox weyn, mana doonayo inaan tago koox kale oo Talyaani ah,” Sidaas waxa uu Suso u sheegay wargeyska Tuttosport , taas oo u muuqata inuu meesha kaga saarayo xiise qarsoon oo uga yimid kooxo horyaalka Serie A ka tirsan.
Tan iyo markii uu Suso tegay horyaalka Talyaaniga, waxa uu u ciyaaray kooxaha Genoa iyo Milan oo isku-darka uu u saftay 101 kulan, waxaanu u dhaliyey 21 gool.
Ma aha markii koowaad ee Real Madrid lagu xidhiidhiyo Suso, hase yeeshee tababarihii hore ee Julen Lopetegui ayaa xagaagii la wariyey inuu doonayey inuu keeno Sanatiago Bernabeu.